Why Business Intelligence is important? - Tech Sound
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ မေးခွန်းတွေနဲ့ပန်းတိုင်တွေရှိပါတယ် ။ အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေကိုရရှိဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ Dataတွေကို စုဆောင်းကာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရုံသာမက ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်လည်း လုပ်ဆောင်ရမဲ့ Actionတွေကို ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် ။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရ ‌Business Intelligenceဟာ Dataကုန်ကြမ်းတွေကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရဲ့ Activityတွေကနေပြီး စုဆောင်းပါတယ် ။ Dataတွေကို လုပ်ဆောင်ပြီး Data Warehouse ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားပါတယ်။ သိမ်းဆည်းပြီးတာနဲ့သုံးစွဲသူတွေကို စီးပွားရေးမေးခွန်းတွေ ဖြေဆိုဖို့အတွက် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ကာ Dataတွေကို Access လုပ်ခွင့်ပေးပါတယ် ။
How Business Intelligence helps Companies?
Business Intelligence ဟာ company များကို သူတို့ရဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေတွေရဲ့ လက်ရှိနဲ့ အတိတ် က အချက်အလက် တွေကိုပြသပေးပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချကိတွေချနိုင်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ် ။ လေ့လာသုံးသပ်သူများက Business Intelligenceရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ကို မြှင့်တင်ဖို့အတွက်နဲ့ အဖွဲ့အစည်းများကို ချောချောမွေ့မွေ့ လည်ပတ်စေရန် ပြိုင်ဘက်ကင်း စံသတ်မှတ်‌ချက်တွေ ပေးနိုင်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် အရောင်း (ဒါမှမဟုတ်) ဝင်ငွေတိုးတက်ဖို့အတွက် ဈေးကွက်လမ်းကြောင်း ကိုလည်း အလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ် ။ ထိရောက်စွာနဲ့ မှန်ကန်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် လိုက်နာမှု ကနေတစ်ဆင့် efforts တွေကိုပါ ငှားရမ်းနိုင်တဲ့အထိ Dataတွေက အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ် ။
Business Intelligenceမှ Companyများအတွက် Dataနှင့်ပတ်သတ်၍ Decision ချနိုင်ဖို့ရန် ကူညီပေးသည့်နည်းလမ်းအချို့
-Customer များရဲ့ အပြုအမူကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
-Data အချက်အလက်များကို ပြိုင်ဘက် Companyများဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ပေးခြင်း
-စွမ်းဆောင်ရည်များကို (Tracks) ခြေရာခံပေးခြင်း